नेपाल भ्रमण वर्षको पहिलो महिनामै घटे पर्यटक.. – Ujyalo Khabar
नेपाल भ्रमण वर्षको पहिलो महिनामै घटे पर्यटक..
काठमाडौं । सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको पहिलो महिना (जनवरी)मै नेपाल आउने पर्यटक घटेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जनवरी २०२० मा कूल ७९ हजार ६ सय ८६ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।
यो संख्या जनवरी २०१९ को तुलनामा १५८७ ले कम हो । २०१९ को जनवरीमा ८१ हजार २७३ पर्यटकले नेपाल भ्रमणा गरेका थिए । जनवरीमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन सामान्य बढेको छ । तर, भारतीय पर्यटकको संख्या भने घटेको छ । यसका वावजुत समग्र पर्यटक आगमन भने ओरालो लागेको हो ।
तथ्यांक अनुसार जनवरी २०२० मा भारतबाट १६ हजार ८ सय ८२ पर्यटक नेपाल आएका छन्। सन् २०१९ मा भारतबाट १७ हजार ६ सय ६३ पर्यटक आएका थिए । चीनबाट सन् २०१९को जनवरीमा १२ हजार ९ सय १९ पर्यटक आएकोमा सन् २०२० मा भने १३ हजार ३ सय ३ जना पर्यटक आएका छन् ।
यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशतले बढी हो । अमेरिकाबाट आउने पर्यटकको संख्या ओरालो लागेको छ । अमेरिकाबाट सन् २०१९ जनवरीमा ६ हजार ५९२ जना पर्यटक आएकोमा सन् २०२० जनवरीमा ६३८६ पर्यटक आएका छन् ।
Previous नेपाली भुमि मिचेकै बेला भारतीय राजदुतलाई देउवाले फोन गरेर के भने ? र प्रधानमन्त्री ओलीले के गरे त !
Next त्रिभुवन विमानस्थलमा आगलागी